Leandro Fernández de Moratín. Sonnets uye epigrams | Zvazvino Zvinyorwa
Moratín Mugwagwa, Madrid.
Leandro Fernández de Moratín akazvarwa kuMadrid pazuva rakaita nhasi 1760. Kunze kwekuve mudetembi, aive mukurumbira mukurusa muSpain weiyo neoclassical theatre. Nhasi ndinorangarira munhu wake wenhetembo uye anoshanda nekusarudza mamwe ake sonnets uye epigrams.
1.1.2 Parufu rwaJoaquín Murat
1.2.1 Pano panonyepa mukadzi wangu
1.2.2 Kune munyori asingafadzi ane bhuku rake hapana munhu aida kutenga
1.2.3 Kune yakaipa bug
Mwanakomana wa Nicolás Fernandez de Moratín, akadzidza mu MaJesuit de Calatayud uye aive mudzidzi kuYunivhesiti ye Valladolid. En 1779 iyo Royal Spanish Academy yakapa yake yegamba kudanana mune hendecasyllables Kutora kweGranada, uye Moratín akawana mukurumbira semunyori wenhetembo.
Aive shamwari yaJovellanos uye yaGodoy's protégé, uye akawana kugona kwake kukuru uye kwakanyanya munhandare. Akaedza kuunza muSpain neoclassical chimiro chechiFrench chiitiko, ndiko kuti, kuremekedza zvikamu zvitatu zvenguva, nzvimbo uye chiito, kuwedzera kune chinangwa chehunhu, asi haana kubudirira kuzviita zvinowanda pakati peveruzhinji.
Yake yekutanga komedi yaive Harahwa nemusikana izvo zvakange zvisina kana mhedzisiro. Nekudaro, makore maviri gare gare aizobudirira nazvo Iyo nyowani nyowani kana kofi.
Iyo famba zvaakatora Europe muna 1792, sezvo yakamuratidza muhupenyu hwake uye hwehunyanzvi. Akazvionera ega zvakange zvaitika kuna French Revolution en Paris, uye mu United Kingdom akasangana nebasa re Shakespeare, munyori aisambozivikanwa kuSpain panguva iyoyo. Ipapo aive achishanyira iyo Netherlands, Germany, Switzerland uye Italy, kubva kwaakadzoka. Yakashandurwa Hamlet muna 1798, yaive yekutanga yakananga Spanish shanduro yeChirungu.
Uye ndizvozvo pakutanga kwezana remakore rechiXNUMX akanyora zvake comedies akanakisa, kwaakanyatsotungamira mutauro, uye maakashoropodza tsika nehunyengeri hwemagariro panguva iyoyo. Tine semuenzaniso Bharoni, Vakangwara y Hungu wevasikana, akafunga basa rake repamoyo.
Ipapo ini ndinosarudza 3 yemanoni ake uye matatu epigrams ebasa rake renhetembo.
Ini ndakazvarwa naamai vakatendeka: ndiudzei Kudenga
yakapusa wonga mukutenda, mutero:
akananga akaziva mweya usina mhosva
pakunaka, kusvinura kwababa.
Nekudzidza kunozivikanwa, kusingagumi kushuvira,
Ini ndakakwanisa kuwana korona pahuma yangu:
iyo hamstring chiitiko chakanzwika kazhinji
Kuombera, kutora ndege kubva kuzita rangu.
Runyoro, rwechokwadi: nevazhinji vakagumburwa,
pasina mutadzi, Muses akanaka
chishuwo changu chaive, kudza mutungamiri wangu.
Asi kana mitemo ichimhanya seizvi,
kana iwe zvawakakodzera wanga uri
mhosva; zvakanaka, nyika yangu isina kutenda.
Parufu rwaJoaquín Murat
Iyo inorara mujecha reropa
chitunha chakavezwa chine mangoma
aive akashinga muranda murima akatengeswa [ado]
Sabhuku weMakondo eSeine.
Kwaari iye mukuru weMadrid anotyisa [azere]
kushingaira kwake uye kushinga kwake kwakamuona achirangwa
kana mushumiri weakaipa anotyisa
mafundo ehukama akashanduka kuita cheni.
King vakadaidzwa muParthenope, kuyedza kwake
kwanga kuri kuna Apostle kupidigura chigaro
uye uwane kukunda kubva kumaKesari.
Muone achiwedzera chidzidzo kune nyika,
ona kuti denga rinoderedza sei kuzvikudza kwaro
uye anovhiringidza ndangariro dzavo nenyadzi.
Kuna Flerida, mudetembi
Enough Cupid kare, izvo kuna mwari
Nymph wekuremekedza Turia ndinonamata:
kana kutarisira rusununguko, kana kukumbira ruregerero,
uye ndinofara kubvuma kune nyeredzi inondikotama.
Ndezvipi zvombo zvitsva zvinokatyamadzwa zvako
kurwisana nehupenyu hwangu, kana kuzvidzivirira ini ndikasakanganwa?
Hongu, ini ndatoyemura iye pakati peye castalio choir
iyo yechiGreek neyechiLatin ichirova zither.
Kare, ndakapfekedzwa korona naFebe laurel,
mundima dzakakwirira dzakazara kutapira,
Ini ndinonzwa izwi rake, nhamba yake yakanaka.
Kune rakanyanya simba simba mukombe
unowana; dai runako rwake chete
zvaive zvakakwana kupa moyo wangu une rudo.
Pano panonyepa mukadzi wangu
Mufaro wakadini nokuda kwedu tose!
akaenda kunoona Mwari,
uye Mwari vauya kuzondiona
Kune munyori asingafadzi ane bhuku rake hapana munhu aida kutenga
Pane posita ndakaverenga,
iro rako basa risingakoshi
Inotengeswa neNamamorcuende ...
Haufanire kutaura kuti anoitengesa;
asi inaro ipapo.
Kune yakaipa bug
Unoona chisikwa chinosemesa here,
yakati sandara, isina bvudzi, isina meno, yakati sandara,
gnarly, uye yakasviba, uye rimwe-ziso, uye hunchback?
Zvakanaka, chinhu chakaipisisa chauinacho ndicho chimiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Leandro Fernández de Moratín. Sonnets uye epigrams